Microsoft oo Tilaabo dib uqaad ah la qaaday Muuqaalka 2007 | Martech Zone
Khamiis, Janaayo 11, 2007 Khamiis, Janaayo 18, 2007 Douglas Karr
Thanks to dadka waawayn at Barta goobta tan ayaa kor u kacaysa.
Waa go'aanno sidan oo kale ah oo runtii kaa yaabinaya Microsoft. Iyadoo Muuqaalka 2007, Microsoft mar dambe ma bixinayso soo bandhigida emayl adeegsiga biraawsarka. Waxayse isticmaali doonaan Ereyga.
Tani waxay keeni doontaa xaddidaadaha soo socda ee Muuqaalka:
wax taageero ah oo loogu talagalay sawirrada asalka ah (HTML ama CSS)
wax taageero ah foomamka
wax taageero ah oo loogu talagalay Flash, ama qalab kale
wax taageero ah oo CSS sabeynaya
taageero looma hayo bedelida rasaasta iyo sawirada liisaska aan xakamaysnayn
taageero looma hayo meeleynta CSS
taageero looma hayo GIF-yada la kiciyey
Faahfaahin dheeraad ah.
Suuq geynta iimaylka ku saleysan ogolaanshaha ayaa ugu dambeyn helaya aqbalaad iyo xawaare leh guud ahaan. Is dhexgalka lala yeelanayo akhristayaasha ayaa ku soo food leh sida 'waxa weyn' ee soo socda iyada oo loo marayo kicinta dhacdooyinka iyo isdhexgalka xogta dheeriga ah.
U shaqeynta adeeg bixiyaha iimaylka ee rukhsad ku saleysan, waxaan sugayay hal-abuurnimo cusub oo ku saabsan macaamiisha emaylka - fursadaha sida Flash in Email, Video in Email, Chat in Email, xitaa Codsiyada Email-ka ee u oggolaanaya dadka waaweyn inay la macaamilaan bangiyadooda, shaqada, asxaabtooda, iyo codsiyadooda si nabad ah oo aamin ah.
Waxay umuuqataa inay Microsoft badaleyso taas. Microsoft waxay gacanta ku haysaa suuqa emaylka… markaa waxay fursad u leeyihiin inay run ahaantii kobciyaan waayo-aragnimada macaamiisha iyagoo hal-abuur ku leh wax soo saarkooda. Hadaan nahay hogaamiyaha suuqa, waa masuuliyadooda. Taabadalkeed, waxay umuuqdaan inay qaadeen wadada fudud oo ay kufashilmeen caqabadda.
Kuwani waa nooca go'aannada ay tahay inay leeyihiin emaillo kale oo horumariya macmiil candhuufta. Hadaadan maqlin magaca ThunderbirdAbsolutely gabi ahaanba waad dooneysaa sanadkan!
Waxaa jira kuwa ku jira IT-ga oo u maleyn kara inay tani tahay barako, waxay u badan tahay inay jiran yihiin oo ay ku daaleen walwal ah arrimaha amniga ee la xiriira emaylka. Si kastaba ha noqotee, noloshooda ayaa wax yar ka sii adkaatay. Go'aanka noocan ah wuxuu si fudud uga dhigayaa dadka isticmaala inay soo dejiyaan oo ay ku rakibaan barnaamijyo kale doono taageer isdhexgalka hodanka ah ee ay raadinayaan. Hadda IT-gu waa inay ka walwalaan waxa ku xiga iyo sida loo xakameeyo.
Hal tusaale: Waxaan xasuustaa markii ay bahda IT-da ee hal shirkad weyn ka shaqeysay lifaaqyada xirmay ee emaylka. Natiijo ahaan, qof kasta oo shirkadda ka mid ah ayaa si fudud u baxay oo helay cinwaan kulul. (Markii ugu dambeysay ee aan maqlo, tan wali waa kiiska iyaga la jirta).
C'mon Microsoft. Aad ayaad uga sii fiicnaan kartaa tan! Kani waa nooca go'aanka dabacsan ee keenaya murugo fara badan Bixiyeyaasha Adeegga Emailka, Hay'adaha, Suuqgeeyayaasha… iyo badiyaaaba, adeegsadayaashaada.
Apple ayaa bilaabay Phone Telefoon. Ma jiraa qof kale oo hamaansanaya?
Jan 11, 2007 saacadu markay ahayd 11:21 PM
Waan ogahay naftayda inaan joojiyay adeegsiga Muuqaalka qaabkan cusub isla markaana daqiiqada duufaanka ay samaysay beta beta waxaan u qaadan doonaa si qoto dheer markale. gaar ahaan marka lagu daro dhejinta sumadda.
Dadka kaliya ee daneynaya Muuqaalka 2007 adoo adeegsanaya Word si ay u bixiyaan e-maylkeeda, iyo luminta astaamaha aan soo sheegnay waa naqshadeeyayaasha iyo horumariye. Maaha USERS!
Muxuu isticmaalehu yiri? Waxaan jeclaan lahaa inaan ka helo kuwa emayllada aan micnaha lahayn u suuq geeya!?.
Muxuu isticmaalehu yidhi? Waxaan u tagi lahaa sawir muuqaal weyn oo emaylkayga ah !?
Muxuu isticmaalehu yiri? Waxaan jeclaan lahaa inaan soo raaco tirada furan ee emaylkeyga !?
Si xushmad leh ayaan kugu raacsanahay waana ogahay, iyadoo ku saleysan sanado xog ah, inaad kujirto tiro yar. Isticmaalayaashu kuma raaxaystaan ​​spam, laakiin waxay ku raaxaystaan ​​e-mayl qurux badan oo ay ku dheehan tahay waxyaabaha ay raadinayaan. Macaamiisha aan la shaqeynayo ayaa si dirqi ah uga hela wax beddelasho ah e-mayllada qoraalka ku saleysan. Email-ka HTML waa la furay, la riixaa, waxaana loo beddelaa sicir jaban.
Emailada aan macnaha lahayn waa in aan waligood la dirin. Si kastaba ha noqotee, dirista emaylka habboon ee leh waxyaabaha saxda ah waqtiga saxda ah waxay u baahan tahay raadinta furitaan, guji-dhexgal iyo beddelaad emaylka si loo ogaado dhadhankaagu waa. Waxaan kula talinaynaa macaamiisheenna inay soo diraan emayllo tiro yar oo tiro yar oo wata waxyaabaha la beegsanayo si ay u helaan natiijooyin… wayna shaqaysaa Xaaladda marka la eego, sahannada ayaa ah wax lagu farxo in lagu ururiyo xogta macmiilka lana siiyo waxa ay doonayaan.
Halkii aad ka heli lahayd emayl qoraal ah oo aan micno lahayn, miyaanay fiicnayn in la helo sahan lagu weydiinayo haddii mawduucu qaraabo kuu yahay? Iyadoo ku saleysan jawaabtaas, shirkaddu waxay uga jawaabtaa si habboon? Macaamiisha Outlook 2007 maheli doonaan khibradaas iyada oo ay ugu wacan tahay go'aanka nafaqada ee silsiladda amarka.
Waa wax badan sida inaad u gasho makhaayada aad jeceshahay halkaas oo ay ku yaqaanaan magacaaga, miiska aad jeceshahay, iyo sida aad u jeceshahay cuntadaada. Taasi ma aysan sameynin iyagoo aan kaa uruurin macluumaadkaas. Waxba kama duwana websaydhka ama emaylka!
Si xushma leh,
Marka laga reebo muuqaalka iyo dareemida emaylka, waxaad ku sameyn kartaa dhammaan qaabeynta qoraalka. Laakiin ma diidayo xaqiiqda ah in dadka isticmaala ay jecel yihiin emayllada wanaagsan, waan sameeyaa. Waxa aan isku dayayo inaan ku helo ayaa ah in emaylku yihiin dukumiintiyo, oo aysan ahayn bogag internet ah. Waxaad awoodi doontaa inaad kudarto isku xirnaansho heer sare ah emaylladaada WPF \_ E iyo qaybaha kale ee soo socda. Kuwani dhammaantood waxay noqon doonaan kuwo madax bannaan waxayna u oggolaan doonaan naqshadeeyaha wax badan oo ka badan kan html, oo ay ku jiraan xaasillo 3d ah oo is dhexgal buuxa leh.
Sababta ugu weyn ee bixiyaha IE loo saaray waa iyadoo ay jirto galitaan gala Windows API. Haddiise sanduuqyo kasta oo "Amniga" ahi ay dhex galaan hal uer waxay la mid yihiin sida "si" fiican "wax kasta".
Sidaa darteed xannibaadda ku xirnaanta inta badan aan la hubin ee macmiilka iyo heerka Exchanage labadaba. Si kastaba ha noqotee waa lagaa aqrin doonaa inaad maamusho codsiyada .NET ee xasiloonidaas leh maadaama dhammaan barnaamijyada .NET ee laga helo ilo aan la hubin ay ku dhex socdaan meel aamin ah oo la caddeeyey oo xaddiday marin u helista iyada oo aan la dhexgalin hodanka mawduuca.
U guurista qaabka Email-ka OpenXML waa feker sare oo loogu talagalay microsoft. Waxay ka dhigan tahay in adeegyadooda ay la falgeli karaan waxyaabaha kale ee OpenXML sida StarOffice iyo OpenOffice. Tani waxay u oggolaaneysaa isticmaaleyaasha inay ka guuraan macaamiishaas, iyo kuwa kale sida Outlook Express oo u gudubta Muuqaalka iyadoon loo guurin qaab email u gaar ah.
Codsiyada af ingiriisiga xun! Maskaxdaydu waxay u shaqaysaa si ka dhakhso badan farahayga!
Jan 16, 2007 saacadu markay ahayd 1:02 PM
Caadi ahaan waa inaan wax ka beddelo qoraalladeyda 2 ama 3 jeer ka dib markaan khaladaadkeyga arko! Walwal ma leh.
Dhibcahaagu waa kuwo aad u fiican I laakiin waxaan u maleynayaa inaan u baahanahay inaan ku xujeysano emaylka sidii kaliya qaab gaadiid. Ka fikir kaliya sida emaylka cajiibka ah ugu jiri karo shaqooyin dheeri ah iyo isdhexgal!